Nendlela yokucwangcisela A Trip To Europe | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Nendlela yokucwangcisela A Trip To Europe
Xa uceba uhambo oluya eYurophu, umele ucinge iinketho ezininzi kangaka! iindawo Endless kunye namava, akwazi ukuba ukuhamba iminyaka kwaye uzive ingathi kubuzwa into kubalulekile. This can lead to making the mistake of over-committing, kwaye uphulukana kwiinkcukacha ezincinane ezenza zokuhamba kunye zokuhamba uloliwe omlingo kangaka. Silapha ukuze bakuxelele into ofanele ukuyenza kwaye Indlela ukucwangcisa i uhambo eYurophu, ukusuka ekuqaleni ukuya ukugqiba!
Icebiso 1: Unciphise It Down
Phambi kokuba kufumana Tapas lakwa- Spanish, piazzas eRoma okanye uphahla terraces kwi-Prague, i bit ebalulekileyo admin iyafuneka! Kalula, ngakumbi walungisa wena xa uceba uhambo oluya eYurophu, enkulu amathuba akho fun kunye uhambo xi-ehlala izinto endandilindele yakho.
Ngoko ke apha Ngaphandle A Ukuqeqesha tip: ukhethe eziphezulu ezintlanu, kumele-dos ukuba adventure European! Mhlawumbi kuya&#8217;s besela kwi - Hofbrauhaus ngo eMunich, okanye ukuthatha uhambo umsele ku Amsterdam, okanye ngokuhlola uDavide-kumacala amaninzi – e Florence. Nakuphi na, balumkeleni abo phantsi ucwangcise uhambo lwakho ezibangqongileyo. Okungcono ngu loliwe.
Prague ukuya eBerlin Amatikiti oololiwe
I-Frankfurt ukuya e-Munich iTikiti lamatikiti
Icebiso 2: Musa ukuphepha cliches.
Ngoku ukuba siye safumanisa ukuba ufuna ukucwangcisa i uhambo eYurophu, olandelayo ukhetha amawzi akho phezulu. Xa umoya yolo, ungafuna ukuya ngaphandle kwebala engqushiweyo kwaye phendla i ubuncwane obufihliweyo ngaphakathi imizi. Kodwa hipster ngaphakathi kwenu ofuna ukuya kulwa zawo ezingqongileyo zesiqhelo, ungafuna ukuthatha isihlalo. On umkhokeli ibhasi. Kukho isizathu sokuba iindawo ezifana i Colosseum, Eiffel Tower, yaye Charles Bridge are all ethandwa kakhulu kunye nabakhenkethi: engu awesome! Musa ucinga ukuba unayo ukufumana ngaphandle kwebala engqushiweyo nje ngenxa kuyo. Ukuba enkulu iindawo ezinika umdla zotyelelo sebecela kuwe, uye ubone ukuba.
Phofu, musa ukunyanga yesikhokhelo nje iindaba ezilungileyo. Isenokuba bathi Louvre yi eliphelele kufuneka-wenze phezu uhambo ku Paris, but maybe you’d have a better day searching for Blek le Rat pieces on alley walls. nezimo, xa uhamba, ngundoqo, njalo!
Amathikithi eLondon ukuya eCologne
ILondon ukuya eBrussels Amatikiti oololiwe
Icebiso 3: Travel dates are crucial when you plan a trip to Europe
Iindawo ezinika umdla ku zonyaka off. iinyanga ethandwayo Julayi, EyeThupha, noSeptemba. Bamatasa aya, singasathethi eninzi! Ukuba uceba uhambo eYurophu e Summer, uya kuba ukwabelana yonke amava single kunye nezigidi kunye nezigidi abahlobo bakho abasenyongweni. Indawo yokuhlala iya zibhalise ngaphandle, okanye zibiza kunye oololiwe ziya kuba kakhulu ngokupheleleyo, bebona ukuba eyona ndlela bahambe!
Icebiso 4: Assemble your travel documents is part of plan a journey to Europe
Ukuba ngaba awunayo i yokundwendwela, ngoko engcono ukufumana ng! Kuya kuthatha ubuncinane iiveki ezine ukuya kwezintandathu ukusuka kwixesha isicelo kuwe ukufumana enye. (Kuxhomekeke ilizwe ohlala kulo kunjalo) njani iinkonzo zakhawuleziswa ukukhawulezisa inkqubo, kodwa liya kukudla malini na. Ngokuba kuhle ukuba anyamekele eli kwangaphambili ngaphambi kohambo lwakho. Uvele ube nencwadana yokundwendwela? Khangela umhla kwalo wokuphelelwa! Amanye amazwe nga akwalele ungeno ukuba sebuphelile ngaphakathi 6 iinyanga xa ufika. to!
Icebiso 5: Ukuqesha imoto.
efuna ukuqasha imoto xa uceba uhambo oluya eYurophu? Qiniseka ukuba ilayisensi yokuqhuba esemthethweni. Ezinye iinkampani lokuboleka imoto kwakhona ukuba abahambi ukuba ilayisensi yokuqhuba ngamazwe xa ukongeza mvume lokuqhuba wabo evela kwilizwe labo lokuzalwa.
I-Strasbourg ukuya e-Paris iTikiti lamatikiti
Icebiso 6: Musa phezu-apakishe uhambo lwakho kunye kwiindawo ezininzi kakhulu.
Njengoko kuchaziwe ngaphambili, kulula ukuba ngaphezu benze kwaye uzame ukugubungela kakhulu. Yinto Kuyaqondakala ngokupheleleyo. ikhefu lakho elixabisekileyo kufuneka zisetyenziswe kakuhle, ngoko ke kulula ukuzama phezu-apakishe yohambo zakho xa uhlela uhambo oluya eYurophu. kunjalo, oku kungaba yindleko (singasathethi kuyakhathaza), kuka-ukupakisha iihambo kunye kwiindawo ezininzi kakhulu kwiintsuku ezimbalwa kakhulu kukhokelela ixesha elininzi endleleni, kunye negesi ngaphezulu okanye amatikiti etreyini. Kwiimeko kakhulu, oko ulimaze uhambo, siwenze ube iimvakatjhi ehotele lokukhangela-ins kunye khangela-outs (kunye ivale rhoqo kunye ukukhupha yonke), ebukele a elidlulileyo le window uloliwe zange watyelela-landscape ngokobuhlanga. Ukuba kuyenzeka, Yehlisa isantya. Niya Ukugcina izinto zokuhamba kwaye bafumane ixesha ukuhlola kwiindawo zakho.
Iibhasi ukuya eRotterdam iTikiti lesitimela
Amatikiti e-Antwerp ukuya eRotterdam
I-Berlin ukuya eRotterdam Iitikiti zesitimela
I-Paris ukuya eRotterdam Iitikiti zoLoliwe
Icebiso 7: imali Exchange
Abahambi ukuchitha imali eninzi kuthengwa euro evela kwibhanki yabo (okanye okubi kodwa, ukusuka counter currency exchange) ngaphambi kokufika eYurophu. Oku kuphumela imirhumo lenkohlakalo! so don’t neglect this subject when you plan a trip to Europe.
icebiso yethu ukuya kwangoko kwi-ATM xa ufika eYurophu ndirhoxise imali usebenzisa ikhadi lakho ATM. Yinto elula, kwaye izinga lotshintshiselwano ukuba bakuzisele bethenga ngokuqinisekileyo ingcono kunokuba nawuphi umlinganiselo siye bade onge uba uncedwa ngayo iibhanki ekhaya. Biza ibhanki yakho phambi kwakho, wabashiya ukubuza malunga imirhumo yorhwebelwano ATM ngamazwe, kwakunye ukukwazisa ukuba uya usebenzisa ikhadi lakho phesheya. Ukuba ngaba ubaxelele, kusenokuba khathaza ukuba ucinga ukuba ubuqhophololo, yaye iya kuvala ikhadi lakho. kwakhona, cela ukuba ibhanki yakho inazo indawo ngamazwe okanye ubambiswano zendawo iibhanki eYurophu.
I-Frankfurt ukuya kwi-Cologne yoLoliwe amatikiti
Iibhrassels ukuya kwitikiti laseCologne yoLoliwe
I-Vienna ukuya kwiTikiti leCologne yoLoliwe
I-Stuttgart ukuya kwitikiti laseCologne yoLoliwe
Icebiso 8: Yintoni uphelelwa kwi kukutshintshatshintsha, win phezu roundabouts
Musa andithandi mbingelelo indawo yakho ukulondoloza ihotele encinane. we sincoma kuqalwa Airbnb wakho okanye ehotele kunye indawo kakhulu esembindini xa uceba uhambo oluya eYurophu. abahambi Budget, ukuthi ngqo, sisoloko sinotyekelo lokukhetha ehotele kwindawo ezikude kangako yiloo € 5 zitshiphu enye leyo central ngakumbi. Niya konga ixesha kunye nemali zokuhamba (ingakumbi xa ngumoya up kweeteksi ukuthatha).
I-Zurich ukuya kwiitikiti zeBasel zoLoliwe
Amatikiti eBern ukuya eBasel
I-Geneva ukuya kwitikiti lase-Basel
Icebiso 9: Don’t forget to call your phone carrier before you plan a journey to europe
Biza nenkampani yakho emva kwakho epheleleyo ekucwangciseni uhambo oluya eYurophu kwaye ufumane i icebof uceba ukusebenzisa ifowuni yakho, uze uqinisekise ukusetha ifowuni yakho ukunqanda iintlawulo data ngengozi (kalula: ukucima iinkcukacha zeselula kunye nokuthintela inani apps ukuba ungasebenzisa kwedatha yeselula). and, njengesicwangciso, anamathele ukuba akhulule uthungelwano Wi-Fi ngenxa bebekhuphela baze ukuthumela ama, Khangela Web kunye nokusebenzisa apps. IYurophu iindawo ezininzi wifi, ngoko aniyi kuba aphume touch ixesha elide. okukanye, athenge ikhadi leSIM ukuze ifowuni yakho xa ufika eYurophu.
Amatikiti eRimini ukuya eMilan
IRoma ukuya eFlorence amatikiti oololiwe
I-Turin ukuya kwitikiti zaseMilan zoLoliwe
I-venice ukuya kwiitikiti zoLoliwe zaseMilan
Icebiso 10: Kukho An App For That
Eightydays is an awesome travel app that can help you plan a trip to Europe while giving travelers an easy look into the options available when ehamba kulo lonke elaseYurophu.
Abasebenzisi qala ngokukhetha isixeko ukuqala ogqiba (okwangoku, ukuba kuyimfuneko ukuqalisa kwaye ukuphelisa uhambo kwi ndawo enye). Emva koko khetha zokusuka, elide kangakanani uhambo iya kuba nendlela ezininzi oya kuyo ukubandakanya. Abasebenzisi kwakhona ukhethe ukuba ufuna ukujonga imizi eYurophu, i-European Union okanye nje i Schengen Zone. Le app ke ukwenza hambo, Mababhale rates Airbnb kwisixeko ngasinye, kwabo ibhajethi.
Yinto enokwenzeka ukuqhubeka iinketho mmangalelwa de app uyakhubeka phezu i hambo mahle. Musani ukubuxhalela zokuhamba nzinyana: The site says kuba ukhula ngqo ngaphandle moya kude-kude and early morning departures that can drain travelers on the road.
Nangona nje (kodwa) inkqubo ilungele kubhukishelwa sonke uhambo European, Eightydays kunokunceda ukunika abahambi uluvo olungcono lamanqaku ixabiso uhambo eyahlukileyo ngelixa angaba libazisa kuyiwa khona ukuze abe ngaphambili ingqalelo.
Travlelers can use le website Eightydays or the newly launched iOS app to plan their European voyages.
ILyon ukuya eLondon amaxesha oLoliwe
Amsterdam ukuya kwiiAntwerp amaxesha oLoliwe
IBrussels ukuya kumaxesha oLoliwe eFrankfurt
Iibhasi eziya kwitikiti laseTransz
Kanjalo, indlela engcono travel ngamaxa Train! Gcina i Train yeyona ndlela ilungileyo bathenge amatikiti yakho. Ukuba uza ukubhukisha amatikiti etreyini yakho nqakraza kwikhonkco https://www.saveatrain.com ukufumana izaphulelo ezinkulu.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye itekisi asinike nje ngetyala nge link kule post blog, okanye cofa apha: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/plan-trip-europe/ - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)
Ukuba ufuna ukuba nobubele kubasebenzisi bakho, wena ndiyabakhokela ngqo amaphepha ukufuna yethu. Kule ikhonkco, uya kufumana iindlela zethu kakhulu ethandwa uloliwe – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une link yethu ngenxa IsiNgesi emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml kwaye ungatshintsha /fr ukuba /kwayo okanye /de kwaye ngaphezulu iilwimi.
#bucketlist #HowToGuideEurope europetravel longtrainjourneys tips uloliwe Travel traveltips
zokuhamba Train France, zokuhamba Train Hungary, zokuhamba Train Italy, zokuhamba Train Spain, Travel Europe
zokuhamba Train Switzerland, Travel Europe
zokuhamba Train France, zokuhamba Train Germany, zokuhamba Train Italy, zokuhamba Train Norway, zokuhamba Train Switzerland, Travel Europe